Usoro na ọnọdụ - V na akwụghị ụgwọ
Emelitere ikpeazụ: September 19, 2019
Biko gụọ usoro ojiji ndị a ("Okwu", "Usoro eji") nke ọma tupu ijie weebụsaịtị webụsaịtị https://tweetybucks.com (“Ọrụ”) nke My Blog (“anyị”, “anyị”, ma ọ bụ “ anyị ”).
Ịnweta na iji nke Ọrụ ahụ na-adabere na ịnakwere na nrube isi na Usoro ndị a. Okwu ndị a metụtara ndị ọbịa niile, ndị ọrụ na ndị ọzọ na-enweta ma ọ bụ jiri ọrụ.
Site na ịnweta ma ọ bụ na-eji Ọrụ ị kwenyere na a ga-ejikọ gị na Usoro ndị a. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na akụkụ ọ bụla nke okwu ahụ ị nwere ike ịnweta Ọrụ ahụ.
Ọrụ anyị nwere ike ịnwe njikọ nke saịtị weebụ ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ nke My Blog na-abụghị ma ọ bụ na-achịkwa.
My Blog enweghị ikike ịchịkwa, ma ọ nweghị ibu ọrụ maka, ọdịnaya, amụma nzuzo, ma ọ bụ omume nke saịtị weebụ ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ ọ bụla. Further na-ekwuputa ọzọ ma kwenye na My Blog agaghị enwe nsogbu ma ọ bụ ga-akwụ ụgwọ, ozugbo ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, maka mmebi ma ọ bụ mfu ọ bụla mere ma ọ bụ ebubo na ọ bụ site na iji ma ọ bụ ịdabere na ụdị ọdịnaya, ngwongwo ma ọ bụ ọrụ dị na ma ọ bụ site na saịtị weebụ ma ọ bụ ọrụ ọ bụla dị otú ahụ.
Anyị na-enye gị ndụmọdụ siri ike ka ị gụọ usoro na ọnọdụ na atụmatụ nzuzo nke ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla ma ọ bụ ọrụ ndị ị gara.
Anyị nwere ike ịkwụsị ma ọ bụ kwụsịtụ ohere ịbanye na Service anyị ozugbo, na-enweghị ọkwa ma ọ bụ ụgwọ, n'ihi ihe ọ bụla, gụnyere na enweghị njedebe ma ọ bụrụ na ị mebie Okwu.
Ngwunye nile nke okwu nke dika ọdịdị ha ga-ala n'iyi nkwụsị ga-alanarị nkwụsị, gụnyere, na-enweghị njedebe, ndokwa nke onye nwe ụlọ, ikike ịhapụ nkwekọrịta, ịkwụ ụgwọ na njedebe nke ọrụ.
Ojiji nke Service ahụ bụ naanị ihe ize ndụ gị. A na-enye ọrụ ahụ na "BAỊBỤ" na "BỤ Ị GA-EME". A na-enye ọrụ ahụ n'enweghị akwụkwọ ikikere nke ụdị ọ bụla, ma ọ bụ gosipụtara ma ọ bụ gosipụtara, gụnyere, ma ọ bụghị njedebe, ikikere nke ahịa, ike maka otu nzube, enweghị mmebi ma ọ bụ omume arụmọrụ.
A ga-achịkwa ma wulite ya na iwu Netherlands na-enweghị mgbagha mgbagha nke usoro iwu.
Enweghị ike ịkwado ikike ọ bụla ma ọ bụ ndokwa nke Okwu ndị a agaghị a ga-eleghara anya maka ikike ndị ahụ. Ọ bụrụ na agbanyere ndokwa nke okwu ndị a ka ụlọikpe ghara ịdị irè ma ọ bụ ghara imeli ya, ihe ndị fọdụrụ na Usoro ndị a ga-anọgide na-arụ ọrụ. Okwu ndị a bụ nkwekọrịta zuru oke n'etiti anyị banyere Ọrụ anyị, ma kwadoro ma dochie nkwekọrịta ọ bụla anyị nwere ike ịnwe n'etiti anyị gbasara Ọrụ.
Anyị na-edebe ikike, na naanị uche anyị, iji gbanwee ma ọ bụ dochie okwu ndị a n'oge ọ bụla. Ọ bụrụ na ngbangharia bụ ihe anyị ga-agbalịa ịnye ma ọ dịkarịa ala ụbọchị 30 mara tupu usoro ọ bụla ọ bụla na-emetụta. Ihe a ga - eme mgbanwe nke ihe a ga - ekpebisi ike na naanị uche anyị.
Site n'ịnọgide ịnweta ma ọ bụ jiri Ọrụ anyị mgbe nyochaa ndị ahụ dị irè, ị kwenyere na ọ ga-agbatị gị site na ngbanwe ahụ. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na usoro ọhụrụ, biko kwụsị iji Service.
Ọ bụrụ na ịnwere ajụjụ gbasara Usoro ndị a, biko kpọtụrụ anyị.